कांग्रेस प्रवक्ता र कोषाध्यक्षको चर्चा
नेपालदृष्टि । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले शनिबार ‘निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र’ लिने भएका छन् । शनिबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा १ सय ३३ जनाले प्रमाणपत्र लिने समय तोकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ। कांग्रेस महाविधेशनबाट सभापतिसहित १३ पदाधिकारी र १२१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन भएका छन्। विधानअनुसार १६७ सदस्यीय हुने केन्द्रीय कार्यसमितिका बाँकी ३३ जना मनोनीत हुनेछन्।
२४–२८ मंसिरसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सबै आइसकेका छन् । आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व महाधिवेशनबाट आउनै पर्ने बाध्यता थियो ।
जसअनुसार १२ पुससम्म महाधिवेशनबाट आएको नयाँ केन्द्रीय समितिको सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसैले १० पुसमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रमाणपत्र बुझ्ने र पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेबारे सभापति शेरबहादुर देउवा आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । उनले त्यसअघि नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने भएका छन् । सभापति देउवाले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता नियुक्त गर्नेगरि छलफल पनि अघि बढाएका छन् ।
यसपटक देउवाले प्रवक्तामा रमेश लेखक र एनपी साउदमध्ये एक जनालाई ल्याउन चाहेको चर्चा छ । यी दुवै नेता देउवानिकट मानिन्छन् । उनीहरुले १४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाको लागि पदाधिकारीमा दाबी नगरी केन्द्रीय सदस्यमा चित्त बुझाएका थिए । साउदले त खुल्ला केन्द्रीय सदस्य (३५०) मा पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालापछिको मत पाएका थिए ।
त्यस्तै, देउवाले कोषाध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ल्याउन चाहेको चर्चा छ । उता, केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित विनोद चौधरीलाई पनि कोषाध्यक्ष बनाउनुपर्ने लविङ सुरु भएको छ। चौधरी अहिले पार्टीको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार समितिको संयोजकपनि हुन् । - रिपोर्टर्स नेपाल
कर्मचारीकोले नै कार्यालयबाटै मिटरबक्स चोर्छन्
किन आक्रषित छन लोक कुखुरा पालनमा किशान ?
कोरोनाको कारण माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द
बिकृतिको रसमा रमेका तीजका गीत
उज्ज्वल थापा ४४ वर्षकै अधुरै यात्रामा अस्ताए